Top kulan ku android 2.3 / 2.2 .
Top Games ee Android 2.3 / 2.2
Dadku siyaabo kala duwan oo marayay waqtigooda, qaar ka mid ah watch TV ama filimada, muusiko dhegayso, ama akhri dhaqaaqdo, halka qaar kalena ay si fudud u soo qaato oo ay Android casriga inuu u ciyaaro nooc kasta oo kulan la heli karo. Maxaa adiga kugu saabsan: waxaa ciyaaro markii ugu jecelyahay aad? Taageere ciyaar waa tigidhka, tigidh in furi doonaa irdaha daad webiga joogta ah bixi Android 2.3 kulan, Android 2.2 kulan aad u ma. Si lagaaga caawiyo in xulashada ugu wanaagsan kulan Android ee 2.3 / 2.2 version category, halkan waxaa ka mid ah doorashada weyn oo ka mid ah kulan ugu fiican ee aad ka heli kartaa qiyaastii.
1. Hoos u Fred
Platform: Android 2.2 oo lagu daray
Waxaa jira kaliya hal eray in lagu qeexo kulankaan - qabatin leh. Waa ciyaar in uu leeyahay caqabado badan oo ay tahay in laga fogaado ciyaartoyda. Haddii aad tahay nooca jecel caqabadaha ka dibna ku dhacaan cas oo aad leedahay lambarka. Habkaani wuxuu ku celiska ciyaarta waa cajiib sida uu farayo in la wadaago dhaco ama saaxiibada si toos ah online si ay u arkaan oo dabcan ku qosli badan. Muuqaaladan muhiimka ah waa watch, celiska degtey, dhawaaqa 3D cajiib ah, iyada oo hoos u 30 khataraha, iwm
2. barafka Fred
Haddii aad gaajo hahaysee daran in rabshad Gore, ciyaarta waxa loogu talagalay adiga. Waxaa qoreysa Lead ah Fred oo uu isku day aan waxtar lahayn inuu ka dhuunto saadaalin ah. In kale si guul leh looga fogaado caqabadaha uu leeyahay in ay dhex maraan hawlaha foosha xun badan, sida inaad diido dhaawac Addinka, madaxa lagaga gooyay ka garbaha, iwm
Dash 3. Agent
Platform: Androids 2.3.3 oo lagu daray
Dash Agent waa ciyaar basaas wada sugayo oo la ciyaaray iyo riyaaqay in ka badan 20 milyan oo ciyaartoyda adduunka oo dhan. Players Heli dhuumaaleysi ku soo galay ciyaarta ugu sareeya qarsoodi ah oo ay ku biiraan in this ciyaarta orodka qarxa oo aad u daran. Waxaa qoreysa Dash Agent ama qof kale dhigaynaa Dambiilayaasha weyn ama geesiyaal sida Queen ah. Haddii aad aqbali, aad shaqo u noqon doonaa inuu guulaysto Dr. Quantumfinger, cadow Dash Agent.
4. Hill Racing fuulin
Tartanka fuulid Hill ka mid ah Physics ciyaarta ugu xiiso leh iyo qabsado oo xuddun u weligaa abuuray waa, oo wararka ka weyn, waayo, waa lacag la'aan ah! Haddii aad go'aansato in aad ka soo dejisan oo ay ku biiraan malaayiin qof oo hore u ciyaarta ka ciyaaro, qof aad la kulmi doonaa waa Newton Bill; dhallinyarada ah wannabe goosh ah taag qaadanaya diyaar u Safar ah in meelaha qaarkood lifti ayaan weligii ka hor.
Platform: 2.2 dheeraad ah
Jetpack Ride waxa la marsiiyey sida mid ka mid ah ciyaarta ugu-up-to-date adduunka oo idinkuna waxaad ogaan waxa, haatanna waa bixi karo online for Free! Players La filayaa inuu ku habboon oo ay la socoto doorasho ee jetpacks yaab leh weligaa abuuray inuu ku soo bilowdo ay safarka iyo cirka sida qof ciyaarta Barry Steakfries. Qof ayaa ilaa xad waa geesi jiidasho in hirgalinayso baaris hal dhinac ah.
6. Arrimaha Didabadda Me
Platform: 2.3.3 Android lagu daray
Tani waa calaamad cusub oo updated version ah ee Arrimaha Didabadda Me, sidaas boodi iyo waayo-aragnimo waxa uu ballan qaaday in ay waqti fiican. Dareen Gru ee daacada, Minion Rush, iyo u faaruqiyeen dahsoon jaalaha ah in ay diyaar u yihiin in ay la jaan ay tartan tastiest weli. Himiladooda waa in ay soo ururiyaan miraha qalaad si ay u diyaariyaan jelly delicious, Dodge, oo duudduuban, oo hayey dadka kale. Kulankan oo aad ku raaxaysan doonaa widhwidha minion yari iyo qosol, kala kulmaan goobta halyeey ka buuxsamay kadis ah, diiqaya, sirta, iyo qaar badan oo.
7. lagu Dhimatay waxay ku
Kolkaasay u Dhimatay waa ciyaar xiiso leh oo aad u xiiso, halkaas oo ciyaaryahano ka helin Naftooda dagaal si ay u noolaadaan oo adduunka ah iyadoo dhintay. Kulan waxay keeneen in aad Dadkan Zombie maalin-of-Xisaabtiisu characters in aadan u malayn in labo jeer hor socdaa baabba '. Waa u xiiso badan, maxaa yeelay, halka ciyaaro kulankaan si ay u noolaadaan musiibadu ku keeneen by Zombies kuwan, waa in aad la diriraan wax kasta oo aad ka heshay sababtoo ah ma jirto wax fursad labaad aad u. Sidaas, si ay u sii noolaadaan, waa in aad u dhaqaaqo joogto ah (slacking lahayn) iyo naftaada ka ciribtir ee Zombies ilaaliyo.
8. careysan awow hooyo (kulanka carar)
Aad jeclaan doonaan in ay qaataan wadada la careysan awow hooyo? Tani waa ciyaarta ay ku qoreysa aad u kulul raadinaya careysan awow hooyo ka go'an in ay xerta ahaa wakiilada Fred oo iyada xidhay in Asylum careysan ah. In ciyaarta iyadu ay qorsheyneysa inay iyada baxsado oo aad u baahan tahay in ay iyada keeni wadooyinka intii ay qaraxa iyaga dhex si ay uga baxsado. Waxay kalaan ku garaaci doonaa, ordo, boodaan, oo slide agagaarka badan caqabado waalan waana shaqadaada si loo hubiyo in iyadu ku guuleystaan.
9. Ruuxa Run
Waxaa la joogaa waqtigii la sii daayo bahal gudaha, qof kasta oo iyaga oo sugaya kaliya waqti ku haboon in la xarigga - waqtiga hadda waa. Kulan Ruuxa Run bixisaa waddo ay ku dhex cibaadaysi jir, dhiigaaga u gargaartaan si ay u weeraraan, difaaco macbudka halligaadda, iyo naftaada oo ah in neef xoolo ah u beddesho. Waxaad 8 characters in ay doortaan in ay awood u aad u rogi doonaan khalqiga macbudka asalka ah. Sidoo kale, waxaad bedeli kartaa oo ay kula tartanto Fox, Bear, Panther, Wolf, gisi, iyo Eygan iyo walax kale oo xiiso leh.
Hel diyaar u ah inay lagu eryi waalan by this ciyaarta Dr. wadista. Qarax loo marayo wadada isticmaalaya ciyaarta ugu dhaqsiyaha badan oo ugu carooday wadida riwaayado.
11. 100 Albaabada of Town Ruuxa
Platform: Android 2.2 ilaa
Kulankan ciyaaryahan aad u hesho si ay u xalliyaan xujooyinka, ogaado waxyaabaha qarsoon, oo ay isticmaalaan awoodooda maskaxda si ay isku dayaan in ay albaabada u furi iyo baxsan qolalka.
12. nooc Alien
Tani waa ciyaar miisan ku kale; khayaali ah classic sayniska, sare hoos u Shooter loo abuuray kooxda 17. Hel diyaar u ah inay la kulmaan eyda shisheeye.
Dib Way ku Age Stone halkaas oo ay tahay ugu weyn ee ay noloshoodu ku ahayd in dagaalkaan dhex gelayaa la qabiilooyinka kale ee khayraadka iyo dhulka. Download kulankaan aad oo ay bartaan sidii ay u yaqaaniin hub inay helaan nolol.
14. 100 Albaabada Full
Hel diyaar u ah inay soo galaan dunida ka mid ah professor ah; hanad waalan oo weyn guulaha uu ahaa mashiinka weynaanteedana ah.
2 15. ChocChoc Pop:
In ciyaaryahanka kulankaan ayaa la filayaa inay ka caawiyaan Emily in iyada Candy Shop, waa maxay sababta? Si loo caawiyo iyada xalliso macmacaanka iyada; ciyaarta kanu inuu runtii yahay mid ka weyn shukulaatada caashaqi jiray.
16. Super Laser, dagaalka ayaa Alien
Kulankan awoodda dagaal ee Alien ayaa xoojinaya MOGA. Ku raaxayso ugu fiican oo dhagax ah oo kulan dagaalladii
17. 100 albaabada u xirnaayeen 2
Isku day inaad si ay u xalliyaan xujooyinka badan, isticmaalka walxaha, iyo awoodda maskaxda si aad u albaabka si ay uga baxsadaan qolalka furo.
18. cararidda Qarsoon
Kulankaan ayaa waxaa u codeeyay ciyaarta ugu dhiirrigelin fakasho 2015. Hel diyaar u ah inuu xaliyo xujooyinkooda iyo xujooyinka gaar ah - waxa hab si kor loogu qaado aad IQ.
19. Raadi 5 Khilaaf
Hel diyaar u ah inay is barbar images xaalkiisa 5 dissimilarities u dhexeeya iyaga
Isbarbardhigga laba sawirada iyo shan heli kala duwanaanshaha u dhaxeeya.
20. baxso magaalada Ruuxa:
Doondoon, oo la ogaado waxyaabaha qarsoon oo u gargaartaan fakashada ka Town Ruuxa.
Halkan waxa aad ka qabto u guys, 10-Android 2.3 kulan iyo 10 Android 2.2 kulan aad ugu faraxsan yahay ciyaaraha. Iyaga Download hadda ama ay doortaan mid ka mid ah doorashadaada iyo dhoolacadeynta mid ka mid ah kulamada in duqeeyo fanaaniinta.
> Resource > Game > Top kulan ku android 2.3 / 2.2